I-GRIM KAKHULU iBritane ngoku inelona zinga liphezulu lokusweleka kukaCovid emhlabeni elinabantu abangama-935 ababhubhileyo ngosuku, isifundo sifumanisa ukuba
I-UK ngoku inelona zinga liphezulu lokusweleka kwi-coronavirus emhlabeni, isifundo esitsha sityhile. I-Bhritane iyigqithile iRiphabhlikhi yaseCzech, ebikhe yabona ezona Coviddeaths ngomntu ngamnye ukusukela nge-11 kaJanuwari, ngokweedatha zamva nje. I-Bhritane inelona zinga liphezulu lokufa kukaCovid emhlabeni, ene-hosp ...
UGqirha Hilary kaGMB ukhupha isilumkiso malunga nemikhuba yevenkile 'kutheni ubeka umngcipheko?'
Ugqirha wase-Good Morning wase-Bhritane u-Hilary Jones ulumkise ababukeli ukuba balumke kwiivenkile ezinkulu kwaye bakhumbule ukuba bangaze bathathe izinto emva koko bazibuyisele. UGqr Hilary wayexoxa ngemikhosi uPiers Morgan kunye noSusanna Reid malunga nokuba kusafuneka silumke malunga nokusasazeka ...
Kutshanje, umntu esisebenza naye kumzi-mveliso wethu utshatile, kwaye bonke abo sisebenza nabo kumzi-mveliso wethu bonwabile ngabo
Kutshanje, umntu esisebenza naye kumzi-mveliso wethu utshatile, kwaye bonke abo sisebenza nabo kumzi-mveliso wethu bonwabile ngabo. Umzi-mveliso wethu awugcinanga ngokuvuma ikhefu labo lomtshato, kodwa uququzelele umbhiyozo wokubhiyozela ngonaphakade naphakade. Umzi-mveliso wethu ubaluleke kakhulu kumalungelo oluntu kwaye ...
Kule nyanga sithumele iimveliso zetyhubhu eziphakamileyo ezingama-3 * 40 eYurophu, eMzantsi Melika, nase-USA, iingxowa zokupakisha zeplastikhi kunye neebhegi zokuthenga ezinganyangekiyo
Kule nyanga sithumele iimveliso zetyhubhu eziphakamileyo ezingama-3 * 40 ukuya eYurophu, eMzantsi Melika, nase-USA, iingxowa zokupakisha zeplastikhi kunye neebhegi zokuthenga ezinganyangekiyo. Okwangoku singqina umdla okhulayo wokunciphisa ukusetyenziswa kweeplastiki zemveli, zombini ngabathengi kwaye, ngakumbi, nangabezopolitiko. Zininzi ...
Umzi mveliso wethu wazisa ibhetshi yoomatshini abatsha kunye nezixhobo ngoDisemba 2020
Umzi-mveliso wethu wazisa ibhetshi yoomatshini abatsha kunye nezixhobo ngoDisemba ka-2020, kubandakanya oomatshini ababetha ifilimu ama-2 *, umatshini wokuprinta o-1 kunye noomatshini abathathu bokwenza ibhegi. Njengomzi mveliso ophambili kushishino lwebhegi elinokutsha, iiodolo bezisanda, kwaye Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabathengi, ke .. umatshini ...